Asase | Deɛ Bible Ka
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Marathi Myanmar Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Telugu Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Adɛn nti na Onyankopɔn bɔɔ asase?
‘Yehowa a ɔnwenee asase no, wammɔ no hunu na mmom ɔnwenee sɛ wɔntena so.’—Yesaia 45:18.
DEƐ NKURƆFOƆ KA
Nnipa pii ka sɛ ɛnyɛ obiara na ɔbɔɔ asase. Asɔre ahodoɔ bi kyerɛkyerɛ sɛ asase yi so deɛ, Onyankopɔn de yɛn baa so sɛ ɔrebɛsɔ yɛn ahwɛ. Sɛ obi fata a na ɔkɔ soro, sɛ ɔmfata nso a na ɔkɔ Ɔbonsam gya mu.
DEƐ BIBLE KA
Bible ka sɛ “Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asase.” (Genesis 1:1) Berɛ a ɔbɔɔ Adam ne Hawa no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monwo na monnɔɔso na monhyɛ asase so mã na monni so, na . . . mmoa a wɔnenam asase soɔ nyinaa, monni wɔn so.” (Genesis 1:28) Owuo koraa deɛ na ɛnni asɛm no mu; asoɔden na ɛkɔfa baeɛ. (Genesis 2:17) Enti Onyankopɔn de asase maa nnipa sɛ yɛntena so daa. Nnipa a wɔn aso yɛ mmerɛ na na wɔbɛhyɛ so mã, na wɔatena so afebɔɔ na wɔahwɛ so.
Enti da bi bɛba a asase bɛsɛe?
“Wode asase atim ne nnyinasoɔ so; na ɛrenhinhim da biara da.”—Dwom 104:5.
Nyansahunufoɔ susu sɛ nneɛma bi bɛtumi asɛe asase anaa ɛbɛduru baabi no nnipa rentumi ntena so bio. Nneɛma a wɔsusu sɛ ɛbɛsɛe asase no bi nie: biribi firi soro bɛba abɛbɔ asase no, egya bɛpae akata asase so, awia bɛdum, anaa ɔhyew bɛba wiase nyinaa. Wɔwɔ adwene nso sɛ anhwɛ a nnipa nam nuklea akodie so bɛsɛe asase no anaa wɔbɛto yaremmoawa agu mframa mu.
Adwene a Onyankopɔn de bɔɔ asase no, ɛnsesaeɛ. Onyankopɔn Asɛm ka no pefee sɛ: “Asase deɛ, ɛtim hɔ daa.” (Ɔsɛnkafoɔ 1:4) Bio, nnipa bɛtena so daa. Bible ka sɛ: “Ateneneefoɔ bɛnya asase no adi, na wɔatena so daapem.”—Dwom 37:29.
Esiane sɛ nkurɔfoɔ adwene yɛ wɔn sɛ asase yi bɛsɛe nti, wɔrefom ɛso nneɛma. Ama nnipa pii anidasoɔ asa, enti deɛ wɔbɛnya adi nnɛ nko ara na wɔdwene ho. Ɛba saa a, wɔnnwene daakye ho. Nanso sɛ yɛgye di sɛ yɛbɛtumi atena ase daa wɔ asase so a, ɛbɛma yɛayɛ nneɛma a ɛbɛboa yɛne yɛn mmusua nnɛ ne daakye.
Enti ɛyɛ ampa sɛ daakye nnipa nyinaa bɛkɔ soro?
“Ɔsoro yɛ Yehowa soro, na asase deɛ, ɔde ama nnipa mma.”—Dwom 115:16.
Nnipa pii adwene yɛ wɔn sɛ nnipa pa nyinaa bɛkɔ soro.
Ɔsoro yɛ Onyankopɔn dea, na asase deɛ ɔde ama nnipa. Bible ka “wiase a ɛreba” ho asɛm. (Hebrifoɔ 2:5) Yesu ne onipa a ɔdi kan a ɔforo kɔɔ soro, na Bible ka sɛ nnipa kakraa bi bɛkɔ soro akɔyɛ adwuma pɔtee bi. Saa nnipa yi ne Yesu bɛdi “asase so ahene.”—Adiyisɛm 5:9, 10; Luka 12:32; Yohane 3:13.
Ka a nkurɔfoɔ ka sɛ nnipa nyinaa bɛkɔ soro no ne Bible nkyerɛkyerɛ nhyia. Sɛ Onyankopɔn de apapafoɔ nyinaa kɔ soro a, ɛbɛkyerɛ sɛ deɛ enti a ɔbɔɔ asase no, wantumi amma anyɛ hɔ. Afei nso ɛbɛkyerɛ sɛ ka a ɔkaa sɛ ɔbɛma yɛatena ase daa wɔ asase so no yɛ nnaadaa. Onyankopɔn Asɛm ka biribi foforɔ koraa. Ɛka sɛ: “Twɛn Yehowa, na fa ne kwan so, na ɔbɛma wo so na woanya asase no adi.”—Dwom 37:34.
Dɛn Nti na Wɔbɔɔ Asase?
Nea enti a wɔbɔɔ asase no, ɛbɛba mu anaa?
Deɛ Bible Ka Fa Asase Ho